Wzọ 4 Ngwa igwe na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ndị ọzọ Social Media | Martech Zone
Ebe ọtụtụ mmadụ na-etinye aka na ịkparịta ụka n'onlinentanet n'ịntanetị kwa ụbọchị, mgbasa ozi mmekọrịta aghọwo akụkụ dị oké mkpa nke usoro ịzụ ahịa maka ụdị azụmahịa niile.
E nwere ndị ọrụ ịntanetị nde 4.388 n'ụwa nile na 2019, na 79% n'ime ha bụ ndị ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mgbe e jiri ya mee ihe, usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike inye aka na ntinye ego nke ụlọ ọrụ, itinye aka na mmata, mana ịnọ na mgbasa ozi apụtaghị iji ihe niile elekọta mmadụ na-eche maka azụmaahịa. Ihe dị mkpa dị mkpa bụ otu ị si eji ọwa mmekọrịta, ọ bụkwa ebe ahụ ka enwere ike igosipụta ohere site na mmụta igwe.
Anyị na-aga na ntiwapụ nke data, mana data a abaghị uru ọ gwụla ma enyocha ya. Mmụta igwe na-eme ka o kwe omume nyochaa usoro data na-enweghị njedebe ma chọpụta usoro zoro ezo n'azụ ha. A na-etinye na enyemaka nke ndị na-amụ maka igwe, teknụzụ a na - eme ka ụzọ data si ghọọ ihe ọmụma dị mma ma na - enyere ndị azụmaahịa aka ịkọ amụma ziri ezi na mkpebi ndị dabere na eziokwu.
Ndị a abụghị uru niile, yabụ ka anyị lebakwuo anya na akụkụ azụmaahịa ndị ọzọ enwere ike ịkawanye mma site na ịmụ igwe.
1. Ika nlekota oru / Nlekọta ndi mmadu
Ọganihu azụmaahịa taa na-ekpebisi ike site n'ọtụtụ ihe, yana ikekwe otu n'ime ihe kachasị emetụta ha bụ aha ịntanetị. Dabere na Mpempe akwụkwọ Nyocha Ndị Ahịa, 82% nke ndị na-azụ ahịa na-enyocha nyocha ntanetị maka azụmaahịa, na nke ọ bụla na-agụ nyocha 10 na nkezi tupu ịtụkwasị azụmahịa obi. Nke a gosipụtara na mgbasa ozi ọma dị oke mkpa maka ụdị, ọ bụ ya mere ndị isi ji achọ ụzọ iji jikwaa aha azụmaahịa nke ọma.
Nlekota oru bu azịza zuru oke, nke bu ichota ihe edere banyere ika na uzo nile di, tinyere ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ntaneti, ntaneti na ntaneti. Ikwenye ulo oru ichoputa nsogbu tupu ha abanye na nsogbu ma meghachi omume na oge, nlekota oru na-enye ndi ulo oru ihe nghota nke ndi ha na ege ha nti, ma si otua na enye aka na ime mkpebi di nma.
Kedu ka igwe igwe si enyere aka ileba anya na ndi mmadu
Dị ka ntọala maka nyocha amụma, mmụta igwe na-atụnye ụtụ na ndị na-eme mkpebi nghọta zuru oke banyere usoro niile na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ ha, ka mkpebi ha wee bụrụ ihe data na-eme na ndị ahịa na-atụkwasị obi, ma si otú a na-arụ ọrụ nke ọma.
Ugbu a chee echiche banyere aha azụmahịa gị niile dị n'ịntanetị — ole n'ime ha ka a ga-enwe? Ọtụtụ narị? Puku? Nakọta ma nyochaa ha na aka abụghị ihe ịma aka siri ike, ebe mmụta igwe na-eme ka usoro ahụ dị elu ma na-enye nkọwa zuru ezu nke ika.
Ọ gwụla ma ndị ahịa enweghị obi ụtọ kpọtụrụ gị ozugbo site na ekwentị ma ọ bụ email, ụzọ kachasị ọsọ iji chọta ma nyere ha aka bụ nyocha mmetụta-usoro igwe mmụta algorithms nke na-enyocha echiche ọha mmadụ banyere azụmahịa gị. Karịsịa, a na-ehichapụ aha njirimara site na ọnọdụ na-adịghị mma ma ọ bụ nke ziri ezi ka azụmahịa gị wee nwee ike ịmeghachi ngwa ngwa n'okwu ndị nwere ike imetụta akara gị. Itinye mmụta igwe na-eme ka ụlọ ọrụ azụmaahịa mara echiche ndị ahịa n'agbanyeghị asụsụ eji ede ha, nke na-agbasawanye ebe nlekota ahụ.
2. Iche ndi mmadu n’uche
Ihe ntanetị nwere ike ịgwa ọtụtụ ihe, dị ka afọ nke onye nwe ya, nwoke ma ọ bụ nwanyị, ọnọdụ, ọrụ, ihe omume ntụrụndụ, ego, omume ịzụ ahịa na ihe ndị ọzọ, nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụrụ ebe na-enweghị njedebe maka azụmaahịa iji kpokọta data gbasara ndị ahịa ha na ndị mmadụ ugbu a. ndị ha ga-achọ itinye aka na ha. Yabụ, ndị njikwa azụmaahịa na-enweta ohere iji mụta banyere ndị na-ege ha ntị, gụnyere otu esi eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a na-akwado usoro ịchọta mmejọ ngwaahịa ma na-ekpughe ụzọ nke ngwaahịa nwere ike isi mepụta.
A nwekwara ike tinye ya na mmekọrịta B2B: dabere na njirisi ndị dị ka nha ụlọ ọrụ, ego ha na-enweta kwa afọ, na ọnụọgụ ndị ọrụ, ndị ahịa B2B kewara n'ime otu, nke mere na onye na-ere ahia anaghị achọ ịchọta otu-nha-niile azịza ma lekwasị ngalaba dị iche iche anya site na iji usoro kachasị adaba maka otu otu.
Etu esi muta igwe na enyere aka nyocha ndi mmadu
Ndị ọkachamara n’ịzụ ahịa nwere nnukwu ọnụọgụ data iji mesoo-anakọtara site na ọtụtụ isi mmalite, ọ nwere ike ịdị ka ọ enweghị ngwụcha mgbe a bịara n’ihe ngosi ndị ahịa na nyocha ndị na-ege ntị. Site na itinye igwe mmụta igwe, ụlọ ọrụ na-eme ka usoro nyocha ọwa dị iche iche dị mfe ma wepụta ozi bara uru na ha. Wayzọ a, ndị ọrụ gị nwere ike iji data emere eji eme ihe iji dabere na nkewa ndị ahịa.
Ọzọkwa, algorithms mmụta igwe nwere ike ikpughe usoro omume nke nke a ma ọ bụ otu ndị ahịa ahụ, na-enye ụlọ ọrụ ohere ịme amụma ziri ezi ma jiri ndị ahụ mee ihe bara uru.
3. Nghọta onyonyo na vidiyo
Na 2020, onyonyo na vidiyo na-abịa dị ka teknụzụ na-apụta dị mkpa maka ụlọ ọrụ niile chọrọ inwe asọmpi. Mgbasa mgbasa ozi, na ntanetị dịka Facebook na Instagram, na-enye ọnụọgụ na-enweghị njedebe nke foto na vidiyo nke ndị ahịa gị nwere ike biputere kwa ụbọchị, ọ bụrụ na ọ bụghị nkeji ọ bụla.
Nke mbu, ichota onyonyo na-enye ulo oru ohere ichoputa ihe ndi kachasi nma nke ndi oru. Site na ịtụle ozi a, ị ga-enwe ike ịme mkpọsa ahịa gị nke ọma iji bulie ma ree ere ma ọ bụrụ na mmadụ ejirila ngwaahịa gị, ma gbaa ha ume ka ha nwalee ya na ọnụahịa mara mma ma ọ bụrụ na ha na-eji ngwaahịa ndị asọmpi. . Ọzọkwa, teknụzụ na-atụnye ụtụ na nghọta nke ndị na-ege gị ntị, dịka foto mgbe ụfọdụ nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe gbasara ego mmadụ, ebe ya na ọdịmma ya karịa profaịlụ juputara na ya.
Zọ ọzọ azụmaahịa ga-esi erite uru site na onyonyo na vidiyo na-achọta ụzọ ọhụrụ enwere ike iji ngwaahịa ha. Internetntanetị taa jupụtara na foto na vidiyo nke ndị na-eme nnwale ma na-eme ihe ndị na-adịghị ahụkebe site na iji ngwaahịa ndị a na-ahụkarị na ụzọ ọhụrụ kpamkpam-yabụ gịnị kpatara iji ya?
Otu Igwe Igwe na enyere aka ichota onyonyo na vidiyo
Igwe ihe omuma bu ihe di nkpa nke onyonyo na ntaneti vidiyo, nke dabere na nkuzi mgbe nile nke nwere ike ikwe omume site na iji algọridim ziri ezi na ime ka usoro a cheta usoro.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mkpa ịchọta ihe onyonyo na vidiyo ndị gosipụtara na ha bara uru na mbụ dị ukwuu nke ozi dị na mgbasa ozi mmekọrịta, nke ahụ bụ mgbe mmụta igwe na-eme ka ozi ahụ dị mfe nke na ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ejiri aka mee. N'ịbụ nke nwere teknụzụ mmụta igwe dị elu tozuru oke, njirimara onyonyo nwere ike ịkwalite azụmaahịa gaa n'ọkwa ọhụụ zuru oke, na-enye nghọta pụrụ iche gbasara ndị ahịa yana otu ha si eji ngwaahịa.
4. Izu ahia na Nkwado Site na Chatbots
Ọtụtụ ndị mmadụ taa na-amata izi ozi dịka ụzọ kachasị adaba maka mmekọrịta mmadụ na ibe, nke na-enye ụlọ ọrụ ohere ọhụụ itinye ndị ahịa aka. Site na ịrị elu nke mkparịta ụka n'ozuzu na mkparịta ụka na-akparịta ụka dịka WhatsApp na Facebook Messenger, ndị na-akparịta ụka na-aghọ ngwá ọrụ ahịa dị irè-ha na-ahazi ozi nke ụdị ọ bụla ma nwee ike ịza azịza nye arịrịọ dị iche iche: site na ajụjụ ajuju na ọrụ ndị metụtara ọtụtụ mgbanwe.
N'adịghị ka njikọ igodo ụzọ na ibe weebụ, nkata na-enye ndị ọrụ ikike ịchọ na inyocha site na iji netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ngwa izi ozi ha masịrị. Ma mgbe ahia dijitalụ nke ọdịnala na-eme site na onyonyo, ederede, na vidiyo, bọọlụ na-eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ijikọ ndị ahịa ọ bụla ma wulite mkparịta ụka nke mmadụ.
Ejiri Igwe Igwe Na-amụ Ihe
Imirikiti nkata na-agba ọsọ na igwe mmụta algorithms. Ọ bụrụ na chatbot bụ ọrụ na-adabere na ya, ọ nwere ike iji mmemme asụsụ na asụsụ iji nyefee azịza ahaziri ahazi na arịrịọ niile n'ozuzu ya na-achọghị ka igwe mụta iji kwado ikike ya.
N'otu oge ahụ, enwere nkata mgbasa ozi na-ebu amụma-na-eme dị ka ndị enyemaka nwere ọgụgụ isi, ha na-amụta na njem iji nye azịza na ndụmọdụ dị mkpa, ụfọdụ nwekwara ike imitateomie mmetụta uche. A na-enweta nkata akparịta ụka data site na mmụta igwe, ebe a na-azụ ha mgbe niile, na-agbanwe ma na-enyocha ihe ndị ọrụ chọrọ. Otu, ihe ndi a na eme ka mmekorita ndi oru ha na ahia karia nke onwe ha: iju ajuju, inye ihe omuma di nkpa, inwe obi uto, na igwu egwu, ebe ndi mmadu na akparita uka na acho ihe enweghi ike inweta mgbasa ozi.
Site na nkata ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi, azụmaahịa nwere ike inyere ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ndị ahịa ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ha nọ. Chekwa ego na oge ma melite ahụmịhe ndị ahịa, ndị na-akparịta ụka na-aghọ otu n'ime mpaghara AI kachasị baa uru itinye ego na azụmaahịa na nnukwu ụlọ ọrụ.
Tags: aiAmamịghe echicheb2bụkpụrụ omumenlekota oruika ahammụta chatbot igwenkataahịa ezubere icheabụrụ teknụzụọkwa ụwa nke akụkọ dijitalụoyiyi udeoyiyi amata igwe mmụtandị nwere ọgụgụ isi na-enyere akangwa igweigwe na-amụta ika nlekota oruigwe na-amụ na-elekọta mmadụ na-ege ntịigwe na-amụ mgbasa ozi mmekọrịtanchịkọta amụmankwado ndị ahịa na-elekọta mmadụSocial Media Marketingmgbasa ozi mgbasa ozilekwasịrị ndị na-ege ntị anyavideo udevideo ude igwe mmụta
Andrey Koptelov bụ onye nyocha Innovation na Itransition, ụlọ ọrụ mmepe sọftụwia nke ọdịnala dị na Denver. Site na ahụmihe dị omimi na IT, ọ na-ede banyere teknụzụ na-emebi ihe na ihe ọhụụ na IoT, ọgụgụ isi, na mmụta igwe.